Onye njem njem njem Solomons Freda Unusi gbara arụkwaghịm
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Onye njem njem njem Solomons Freda Unusi gbara arụkwaghịm
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Solomon Islands • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Otu n'ime njirimara ndị ọzọ dị elu na South Pacific njem nlegharị anya, Tourism Solomons 'Freda Unusi gbadara n'ọkwá njikwa ahịa ọ jigidere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri.
N'ikwupụta ozi ọma ahụ, onye isi oche ndị njem nleta na njem nleta, Chris Hapa kwuru na ọ bụ ezie na ndị otu a nwere nwute dị ukwuu ịhụ Freda ịpụ, nzukọ ahụ ga-atụgharị uche n'otú enwere obi ụtọ ịnwe onye ọ bụla nwere ọkwa ya n'ụgbọ ahụ ogologo oge.
"Ọ nwere ike ịbụ naanị mmadụ pere mpe na nkwonkwo, mana aha Freda buru ibu ma na-asọpụrụ ya nke ukwuu, ọ bụghị naanị site na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ya na Solomon Islands kama ọ gafere South Pacific na gafere," Maazị Hapa kwuru.
“N’oge ya na Tourism Solomons, o mezuola ọtụtụ ihe dị iche iche, ha niile esorola nyere aka mepụta profaịlụ mba dị ukwuu maka Solomon Islands ọ hụrụ n’anya na site na mgbakwunye, ịbawanye mba ụwa.
“Abụọ, ọkachasị, pụta ìhè - ọrụ ọ rụrụ na ijikwa ihe na-anọchite anya mmemme ahịa anyị kachasị ukwuu, nyochaghachi aha nke Solomon Islands Visitors Bureau (SIVB) na Tourism Solomons.
"Tinye na nke a akụkụ ya na ịmalite 'Me Save Solo' njem mgbanwe nke mgbe afọ abụọ zuru ezu sikwuo ike dị ka otu n'ime South Pacific 'ga-ịga' ihe maka ndị na-azụ mba."
Ihe ịga nke ọma n'akụkụ, Maazị Hapa kwuru na ọ dị mkpa ka a kwenye Freda maka ikike iduzi ya n'oge nsogbu na ọkachasị n'April afọ gara aga mgbe ndị otu njem njem nleta na ndị njem na-eme njem nlegharị anya na-agbada n'ihi ọnwụ nke ndị Stella hụrụ ha n'anya. Lucas na Chris Nemaia.
Freda sonyeere SIVB ahụ na Ọktoba 2009 dị ka njikwa ahịa mgbe afọ 14 gachara na Solomon Islands Water Authority.
Ntozu ya gụnyere nzere nkwukọrịta na ọdịiche sitere na Mahadum Central Queensland ebe ọ bụkwa onye otu onye ama ama ama ama ama ama.
Ọtụtụ ndị Freda amaghị bụkwa nọọsụ eze azụrụ azụ enwetala ntozu ahụ ebe ha bi na New Zealand.
Atụmatụ ya ozugbo ọ hapụrụ njem nleta Solomons ka ọ gbanwee oge ya na di ya, ụmụ anọ na nwa nwanyị.
A na-atụ anya na ọgbakọ ndị njem Solomons ga-ekwupụta nnọchi ya na ụbọchị ndị na-abịanụ.